UManson Ilungu Lentsapho uLinda Kasabian
Iphrofayili yoLungu loMndeni we-Ex-Manson uLinda Kasabian
UCharles Manson wenza umnxeba xa ekhetha uLinda Kasabian ukuba ajoyine iqela lababulali abaye baphuma ukubulala wonke umntu ngaphakathi kwindlu yomdlali we-actress uSharon Tate noLeno noRosemary LaBianca. UKasabian wayekho kodwa wahlala ehlekisayo njengoko ukukrokra kwamaxhoba waphula ubusuku bokuthula. Wakwazi ukubalekela kwintsapho yaseManson kwaye kamva wajika ubungqina belizwe ngexesha lovavanyo lokubulala u-Tate noLaBianca.
Kwakungowokufaka ubungqina bamehlo obungqina bokuthi bawutywinkqise ukuthethwa ngabo baxanduva lokubulala ngobugwenxa.
ULinda Kasabian wazalwa ngoJuni 21, 1949, eBidideford, eMaine. Xa wayeneminyaka eyi-16 ubudala, wayeka isikolo, washiya ekhaya waza waya entshonalanga efuna intsingiselo yobomi. Ngethuba esendleleni, wayehlala kwiindawo ezahlukahlukeneyo ze-hippie apho ahlala khona ngokwesondo ngokungaqhelekanga kunye neziyobisi. Xa wayeneminyaka engama-20 ubudala, wayenomtshato wesibini umtshato kwaye wazala umntwana wentombazana. NgoJulayi 4, 1969, ekhulelwe umntwana wakhe wesibini, watyelela u Spahn Ranch waza wajoyina uCharles Manson kunye nosapho lwaManson.
Ngomhla ka-Agasti 8, 1969, uKasabian, owayesebenye kunye neentsapho zeManson ngeveki ezine, wakhethwa nguManson ukuqhuba amalungu omndeni uThis Watson, uSusan Atkins kunye noPatricia Krenwinkel ukuya ku-10050 Cielo Drive. Isabelo sobusuku kwakuwukubulala wonke umntu ngaphakathi kwindlu. U-Manson wayekholelwa ukuba ukubulala kwakhe kwakuza kukhawuleza ukuqala kwemfazwe yezobuhlanga ebeyichaze kwaye yathiwa nguHelter Skelter.
Yayiyilesi yomdlali uSharon Tate nomyeni wakhe, umlawuli wefilimu waseRoma Roman. Esi sibini sasiqashisa indlu kunye noSharon Tate, owayeneminyaka engama-8 nesigamu esakhulelwe, wamema i-Hollywood ye-hairstylist, uJay Sebring, u-Abigail Folger kunye nomdlali wePolish Wojciech Frykowski, ukuba bahlale njengeendwendwe zendlu ngexesha i-Polanski yayingekho eLondon.
I-10050 i-Cielo Drive yayisakuba ngumzi womvelisi wokurekhoda uTerry Melcher, owathi uManson uzame ukufumana i-contract yekontrakthi kunye naye, kodwa loo nto ayizange ibe yinto. Ubushushu uMelcher wayemshiya, uManson xa wayeya ekhaya ukuba ahlangabezane naye, kodwa uMelcher wayefuduke kwaye uManson wacelwa ukuba ashiye kuloo ndawo. Inomsindo kwaye iyanqatshwa, idilesi yaba ngumqondiso wento yonke uManson ayithiywayo malunga nokusekwa.
Xa amalungu omndeni kaManson afika kwikhaya laseTate, uKasabian wayebukele njengokuba lixhoba lokuqala leqela, uSteven Parent, oneminyaka eyi-18 ubudala, wadutshulwa wabulawa nguMatan Watson. Umzali wayesanda kuphumelela esikolweni esiphakeme kwaye wayezama ukunyusa imali kwiikholeji. Wayenethemba lokuthengisa itrediyo yakhe kumhlobo wakhe uWilliam Garretson, owayengumncedisi wekhaya laseTate. Emva kokundwendwela kunye neGarretson, wayesekhaya kwaye wayeqhuba ukuya emasangweni ombane ukuba ashiye ikhaya laseTata, njengoko kwafika iqela leManson. UWatson waqhawula waza wamtshiza kathathu, wambulala.
UKasabian kamva wema umlindi ngaphandle kwekhaya laseTate waza weva ukukhala okuvela ngaphakathi. Wayebukeka eshaqeka njengoko abanye bexhoba beza begijima ngaphandle kwekhaya, banjiswe egazini kwaye bekhala ngenxa yokuncediswa, kuphela babanjwe bahlaselwa ematshini angaphambili ngemigca phambi kukaThatson noSusan Atkins.
UKasabian wazama ukuyeka ukubulala abantu ngokuxelela leli qela ukuba wayeva umsindo, kodwa iinzame zakhe zahluleka kwaye wonke umntu ngaphakathi endlwini, kuquka neenyanga ezisibhozo ezithwele uSharon Tate wabulawa ngokukrakra. Emva kokubulala, uKasabian wazisula igazi kunye neminwe yeminwe kwizixhobo ezazisetyenziselwa ukubulala waza waziphosa emgodini.
Ngobusuku obulandelayo uKasabian wayala uManson ukuba abuye kwakhona kwaye kamva wangqina ukuba wayeyika kakhulu ukumxelela. Ngeli xesha iqela libandakanya uManson, Watson, Atkins, Krenwinkel. Kasabian, Van Houten kunye noSteve Grogan. Eli qela liqhubela kuLeo naseRosemary LaBianca . UManson wokuqala noTe wangena ngaphakathi kwindlu yaseLaBianca waza wabopha isi sibini. Walalela uWatson, uKrenwinkel, noVan Houten ukuba bangene ngaphakathi babulale loo mbhangqwana. UManson, Kasabian, Atkins noGrogan baxotha, baza bazingela elinye ixhoba.
UManson wayefuna ukufumana nokubulala umdlali weqabane owayengomnye weentombi zeKasabian. Wayechaza ngokucacileyo indlu yokuhlala engafanelekanga kwaye iqela, elinxungule lokuhamba ngokujikeleza, layeka waza wabuyela kwisihlwele.
I-Kasabian ihamba i-Spahn Ranch
Kwiintsuku ezimbini emva kokuba uLaBianca abulale, uKasabian uvuma ukuqhuba i-errand kuManson, wasebenzisa ithuba lokubaleka kwi-Spahn Ranch. Ukuze agweme ukusola kwakhe kwafuneka ahambe nentombi yakhe uTonya ngasemva. Kamva wafumana intombi yakhe kwikhaya elincinci apho yafakwa khona emva kokuhlaselwa kwamapolisa e-Spahn Ranch.
UKasabian Uguqula Ububungqina Bombuso
UKasabian waya kuhlala nonina eNew Hampshire. Isiqinisekiso sokubanjelwa kwakhe sakhishwa ngoDisemba 2, 1969, ngenxa yokubandakanyeka kwakhe ekubulaweni kweTate noLaBianca. Ngokukhawuleza waphendukela kumagunya waza wajika ubungqina bombuso waza wanikwa umlingo wobubungqina bakhe.
Ububungqina bakhe babaluleke kakhulu ukutshutshiswa kwimeko yokubulala uTate-LaBianca. Abaphikisana nabo uCharles Manson , uSusan Atkins, uPatricia Krenwinkel noLeslie Van Houten batholakala benetyala ngokusekelwe kwisigidimi esithe ngqo kunye nesinyanisekileyo. Emva kwetyala, wabuyela eNew Hampshire apho wayejongene nokuhlambalaza. Ekugqibeleni waguqula igama lakhe kwaye kuye kwaxelwa ingqungquthela yafudukela eWashington State.
Qaphela kwakhona: I-Album yeMonkey Family Photo Album
Shadows Desert nguBob Murphy
Ncedisa i Skelter nguVincent Bugliosi kunye noChart Gentry
Uvavanyo lukaCharles Manson nguBradley Steffens
UKenisha Berry wabulala enye intsana kwaye wazama ukubulala enye
Ukubulala kunye neMeya kwi-Osage Hills
Itsa Andrews Case
Imbali yoMlandeli kaManson uLeslie Van Houten
UMarcus Schrenker Ufake Ukufa Ukuze Ubalekele Inkathazo Yezemali
Ababulali bakaRonald Rankins no-Eric Glover
UShawn Hornbeck Ukuthunjwa: Kutheni Akazange Abaleke KuCaptor Wakhe
Ukutshintshwa kwe-Fetal: I-Curthia Curry Case
IiFilimu zeMfazwe eziPhambili kunye eziMbi kakhulu malunga noQeqesho oluQe
Indlela yokusebenzisa i-Object Direct Pronouns kwixesha elidlulileyo
Abathungisi bekhompyutha ye-Modern
Isicwangciso soSifundo se-ESL sokufundisa abaFundi ngeeNkcazo zeSizwe
Ngaba iGanja Legal ngoRastas eUnited States?
Ukukhangela Ubunini beBundu ngoRhulumente
Iipilisi zeVindolanda - Iincwadi zeKhaya ezivela kwiiForam zaseRoma eBrithani
Ngaba ii Bugs zinamalungelo?
INtshumayeli 3 - 'Isikhathi Sento Yonke'
Ngaba amaRoma ayakholelwa inkolelo yabo?
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngama-PAC Aphezulu
I-Zuppa di Alfabeto: Izibheno zesiTaliyane kunye nama-Acronyms
Ukudala indawo yeKlasi yeZifundo
Yonke Yonyaka Inkcazo yeCattering Skating eCalifornia
Ukuphononongwa: Superman: Lois & Clark # 6 (2016)
Izihlomelo zesiFrentshi: Encore vs Toujours
I-Jar iThetha kwi-Folk Magic
I-French Revolution Time: 1793 - 4 (The Terror)